कलेजका विद्यार्थीहरु असुरक्षित सह#वास गर्नु को कारण के हो ? - Aajako Nepali Khabar
कलेजका विद्यार्थीहरु असुरक्षित सह#वास गर्नु को कारण के हो ?
कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरु असुरक्षित यौ#न क्रियाकलापमा संलग्न हुनुमा उनीहरुको अस्थीर जिवनशैली मुख्य कारक तत्वको रुपमा रहेको अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
इलिनोइस विश्वविद्यालयका शेाधकर्ताका अनुसार आफ्नो जिवनमा आइरहने लगातारका संक्रमणहरुका कारण युवायुवतीहरुले प्रसस्त अस्थीरता अनुभुत गर्दछन् र सोही कराण असुरक्षित यौ#न क्रियाकलापमा संलग्न हुन पुग्छन् ।
२१ वर्षमुनिका ३९८ जना कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरुमा यो अध्ययन गरिएको थियो । शोधकर्ताहरुका अनुसार दीर्घकालीन सम्बन्ध नहुने पार्टनरसँग पनि से#क्स गर्ने, साथी तथा नयाँ मानिससँग पनि योजनावीहिन, भद्रगोल तथा भैरपरी से#क्स गर्ने तथा झट्कापूर्ण यौ#न व्यवहारलाई जोखिमपूर्ण से#क्सको रुपमा औल्याएका छन् ।
जिवनमा जति अस्थीरता महसुस भयो विद्यार्थीहरु उति नै बढि जोखिमपूर्ण यौ#न क्रियाकलापमा सहभागी हुने गरेको शोधकर्ताहरुको ठम्याइ छ । यसको मुख्य कारण उनीहरुको भौतिक तथा संवे#गात्मक थकान र विवेकशील रुपमा सोँच्ने क्षमतामा ह्रास हुनु हो ।
१८ देखि २५ वर्षका युवायुवतीहरुमा अभिभावकबाट पाउने स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदै गइरहेकेा छ । सोही स्वतन्त्रताको उपयोगका क्रममा उनीहरुले धेरै खाले प्रयोग गर्ने गर्छन र आफ्नो रोमान्टिक पहिचानको खोजी गर्दछन् ।
आन्दोलन छियाछिया हुनबाट रोक्न नसकिए ऐतिहासिक उपलब्धि समाप्त हुने चिन्ताः वामदेव गौतम